ရေချိုးနေစဉ် အပေါ့သွားခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ - Real Gaming Myanmar
By thant naing /3months ago / Health, Knowledge / No Comments
လူတော်တော်များများက ညစ်ပတ်တဲ့အရာတွေကို မကောင်းဘူးလို့မှတ်ယူထားကြပါတယ် … ။အမှန်ပါပဲ … ။လူကြားထဲမှာ လက်သည်းကိုက်ရင်း ထွေးထုတ်နေတာတို့ ၊ လက်သည်းရှည်တွေနဲ့ ချောကလက်ပုလင်းထဲနှိုက်စားနေတာတို့ ၊ သုံးပြီးသားတစ်ရှူးတွေကို ခုံပေါ်မှာထားခဲ့တာမျိုးဟာ ညစ်ပတ်တဲ့အပြုအမူမျိုးတွေပါ။ဒါတွေနဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ရေချိုးရင်း အပေါ့သွားခြင်းဟာ အလွန်ညစ်ပတ်တယ်လို့ယူဆရမှာပေါ့။လူတိုင်း ဝန်မခံချင်ကြပေမယ့်လည်း ရေချိုးစဉ် အပေ့ါသွားတယ်ဆိုတာကတော့ မငြင်းနိုင်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါပဲ …. ။မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ရေချိုးခန်းမျှဝေသုံးစွဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့ အပေါ့မသွားသင့်ဘူးပေါ့ နော့် … ။
အဓိပ္ပါယ်မရှိသလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ရေချိုးစဉ်အပေါ့သွားခြင်းကြောင့် ရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေပါသေးတယ် … ။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့ ။ သာမန်အချိန်တွေမှာဆိုရင်တစ်ရှူးအသုံးပြုပြီးသန့်စင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် ရေချိုးနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာတော့ စင်ကြယ်အောင်သန့်စင်ဆေးကြောနိုင်တာအမှန်ပါတယ် … ။
ပြီးတော့ ရေအကုန်အကျလည်းသက်သာတယ်။ အိမ်သာမှာအပေါ့သွားပြီး ရေဆွဲချမယ်ဆိုရင် ရေတွေအများကြီးကုန်တယ်လေ ..။အိမ်သာရေတစ်ခါဆွဲရင် ရေ ၁.၅ ဂါလန်လောက်ကုန်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရေဖြုန်းတီးရာလည်းမကျတော့ဘူးပေါ့။ထို့အပြင် ဆီးဟာ ယားနာတွေကို ပျောက်စေတဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိတာကြောင့် ခြေထောက်မှာယားနာတွေပေါက်နေရင် ပျောက်သွားနိုင်တာပါပဲ … ။အိမ်သာဆေးရလည်းသက်သာတယ် ။ အထူးသဖြင့် မချိန်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ပေါ့ နော် … ။
ငွေကုန်ကြေးကျလည်းသက်သာစေပါတယ်။ အိမ်သာမှာအပေါ့သွားတဲ့အခါ ရေဆွဲချရတာပဲမဟုတ်လား ။ ဒီတော့ ရေသုံးရတာပေါ့။ရေဆိုတာကလည်း ရေမီတာနဲ့ တွက်ပြီးရှင်းရတာပဲလေ မဟုတ်လား …။ထို့အပြင် ဆီးဟာ လူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပိုးသတ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ ဒဏ်ရာပေါ်ကို ပေါက်ချမယ်ဆိုရင် ပိုးမဝင်တော့ပါဘူး နော် … ။အက်ဆစ်ဓါတ်ပါတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်မှာ မှိုဆွဲခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ် … ။ ကဲ .. ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလိုက်လဲ …. ။
ဒီတော့ တစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့အချိန်မှာ ရှက်မနေပါနဲ့ ။ ပေါက်သာပေါက်ချလိုက်ပါ နော် ….. ။
လူတျောတျောမြားမြားက ညဈပတျတဲ့အရာတှကေို မကောငျးဘူးလို့မှတျယူထားကွပါတယျ … ။အမှနျပါပဲ … ။လူကွားထဲမှာ လကျသညျးကိုကျရငျး ထှေးထုတျနတောတို့ ၊ လကျသညျးရှညျတှနေဲ့ ခြောကလကျပုလငျးထဲနှိုကျစားနတောတို့ ၊ သုံးပွီးသားတဈရှူးတှကေို ခုံပျေါမှာထားခဲ့တာမြိုးဟာ ညဈပတျတဲ့အပွုအမူမြိုးတှပေါ။ဒါတှနေဲ့ ယှဉျမယျဆိုရငျ ရခြေိုးရငျး အပေါ့သှားခွငျးဟာ အလှနျညဈပတျတယျလို့ယူဆရမှာပေါ့။လူတိုငျး ဝနျမခံခငျြကွပမေယျ့လညျး ရခြေိုးစဉျ အပေ့ါသှားတယျဆိုတာကတော့ မငွငျးနိုငျတဲ့အမှနျတရားတဈခုပါပဲ …. ။မိသားစုဝငျတှနေဲ့ ရခြေိုးခနျးမြှဝသေုံးစှဲနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ အပေါ့မသှားသငျ့ဘူးပေါ့ နေျာ့ … ။
အဓိပ်ပါယျမရှိသလိုဖွဈနမေယျဆိုပမေယျ့လညျး ရခြေိုးစဉျအပေါ့သှားခွငျးကွောငျ့ ရလာမယျ့အကြိုးကြေးဇူးတှရှေိနပေါသေးတယျ … ။အထူးသဖွငျ့အမြိုးသမီးတှအေတှကျပေါ့ ။ သာမနျအခြိနျတှမှောဆိုရငျတဈရှူးအသုံးပွုပွီးသနျ့စငျရတယျဆိုပမေယျ့ ရခြေိုးနစေဉျအခြိနျအတှငျးမှာတော့ စငျကွယျအောငျသနျ့စငျဆေးကွောနိုငျတာအမှနျပါတယျ … ။
ပွီးတော့ ရအေကုနျအကလြညျးသကျသာတယျ။ အိမျသာမှာအပေါ့သှားပွီး ရဆှေဲခမြယျဆိုရငျ ရတှေအေမြားကွီးကုနျတယျလေ ..။အိမျသာရတေဈခါဆှဲရငျ ရေ ၁.၅ ဂါလနျလောကျကုနျပါတယျ။ ဒီတော့ ရဖွေုနျးတီးရာလညျးမကတြော့ဘူးပေါ့။ထို့အပွငျ ဆီးဟာ ယားနာတှကေို ပြောကျစတေဲ့အစှမျးသတ်တိရှိတာကွောငျ့ ခွထေောကျမှာယားနာတှပေေါကျနရေငျ ပြောကျသှားနိုငျတာပါပဲ … ။အိမျသာဆေးရလညျးသကျသာတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ မခြိနျတတျတဲ့အမြိုးသားတှအေတှကျပေါ့ နျော … ။
ငှကေုနျကွေးကလြညျးသကျသာစပေါတယျ။ အိမျသာမှာအပေါ့သှားတဲ့အခါ ရဆှေဲခရြတာပဲမဟုတျလား ။ ဒီတော့ ရသေုံးရတာပေါ့။ရဆေိုတာကလညျး ရမေီတာနဲ့ တှကျပွီးရှငျးရတာပဲလေ မဟုတျလား …။ထို့အပွငျ ဆီးဟာ လူရဲ့ကိုယျပိုငျပိုးသတျဆေးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ထိခိုကျဒဏျရာရတဲ့အခါ ဒဏျရာပျေါကို ပေါကျခမြယျဆိုရငျ ပိုးမဝငျတော့ပါဘူး နျော … ။အကျဆဈဓါတျပါတဲ့ ပိုးသတျဆေးတဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ ရခြေိုးခနျးကွမျးပွငျမှာ မှိုဆှဲခွငျးကိုလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါသေးတယျ … ။ ကဲ .. ဘယျလောကျအဆငျပွလေိုကျလဲ …. ။
ဒီတော့ တဈယောကျထဲရှိတဲ့အခြိနျမှာ ရှကျမနပေါနဲ့ ။ ပေါကျသာပေါကျခလြိုကျပါ နျော ….. ။
Previous: လိုသလိုအချိန်ခရီးသွားနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ လူပြောများနေတဲ့ နာဇီခေါင်းလောင်း
Next: ရွှေကြာဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီ ရသွားတဲ့ ဖွေးဖွေးအတွက် ပရိသတ်တွေက ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ … ။